Tora 275 matemplate eBooks Munyori weyuro imwe chete | Ndinobva mac
Basa roga roga rine zvikamu zviviri zvakanyatsosiyaniswa, zvirimo uye dhizaini, uye dzimwe nguva, kukosha kwekuteerera dhizaini uye kuti ndeyepakutanga, inyowani, dzakasiyana, inokatyamadza, inotitadzisa kutarisa kune izvo, pakupedzisira., Iri yezvakanyanya kukosha, zvemukati.
Saka kuti haufanire kutarisisa zvakanyanya kunze, uye kuti ugone kutarisisa mukati, nhasi ndinokuunzira chipo chikuru ichi, muunganidzwa 275 matemplate ezvisikwa zvako muBooks Munyori kuti ivo vanozokubhadhara iwe zvishoma pane izvo zvinodhura kofi.
Mabhuku Mill - Themes eiBooks Munyori
Kufanana neChipiri chega chega, ini ndiri pano kuti ndikuudze yekutanga svondo kupa kwavanotiunzira kubva Mac App Store Kutengesa. Kana mazuva mashoma apfuura ndakakuunza anopfuura mazana maviri matemplate eWork uye, munguva pfupi yapfuura, ndakakuzivisa nezve mazana ematemplate eKeynote neMapeji pamutengo unosetsaIkozvino iko kuchinjika kweimwe yeakanakisa maturusi akagadzirwa neApple yekugadzira uye kutsikisa mabhuku kubva kuMac, iBooks Munyori.
Mabhuku Mill zvakapfuura Anwendung; zviri chaizvo a muunganidzwa unosanganisira anopfuura makumi maviri nemashanu matemplate akarongedzwa muzvikamu zvakasiyana (bhizinesi, yekubika, emadhigiri mabhuku ...) yakasarudzika uye yekutanga, iine akasiyana siyana magadzirirwo saka mabhuku ako anotaridzika zvirinani kupfuura nakare kose. Kunge mamwe maficha andatove ndakuunzira kuSoy de Mac, ne Mabhuku Mill zvese zvaunofanirwa kuita kusarudza template yaunoda zvakanyanya uye wedzera zvako zvemukati; iwe unogona kuwedzera zvinyorwa, mavhidhiyo, mifananidzo, mifananidzo, matafura kana mapikicha chero kupi pane peji uye nekukurumidza uye nyore, nekukanda kamwe chete.
Zvakare unogona kugadzirisa uye kuchinja font, maitiro, mavara, kupa rako basa kungo tarisa iwe kwaunoda, yakasarudzika uye yega.
Mabhuku Mill - Themes eiBooks Munyori chiri chikamu cheMac App Chitoro chekusimudzira icho vhiki rega rega chinotiunzira maviri epamusoro-kukosha manyorerwo nezvidimbu zvinopfuura makumi mapfumbamwe muzana. Uku ndiko kupihwa kwekutanga kwevhiki, uye munogona kuiwana kusvika mangwana chitatu pakati peusiku kwema 1,09 euros chete zvakananga paMac App Store. Rangarira kuti pakushanda kwayo chaiko unofanirwa kuve wakaiswa macOS Sierra 10.12 uye yazvino vhezheni yeBooks Author yakaiswa pane yako Mac komputa.
DesiGN Mabhuku Munyori Matemplate21,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Tora 275 matemplate eBooks Munyori weyuro imwe chete